Kedu usoro iwu SEO kachasị ọhụrụ?
N'oge a, Google na egosiputa nsonaazụ ọchụchọ, nke dị anya site na ndị omenala karị (M na-ekwu na ọ bụ naanị ebe nrụọrụ weebụ) anyị hụrụ afọ ole na ole n'ihu. Google's search algorithms, nakwa dị ka isi SEO ụkpụrụ, na-evolving. Ugbu a, engines ọchụchọ na-edepụta karịa ihe ị rịọrọ - dịka SERPs dị na Google, yana yana Yahoo na Bing na-ekpuchi ugbu a ihe oyiyi, vidiyo, mgbasa ozi ọha na eze, na map ndị dị na mpaghara.Ya mere, ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa na ịzụ ahịa dịka onye nwe ụlọ ahịa n'Ịntanet, jide n'aka na ị ga-ahụ ụfọdụ n'ime ụkpụrụ SEO kachasị mkpa taa.Ndi ebe nrụọrụ weebụ gi kwesiri ka mma onu ogugu gi na ihe ozo? Mgbe ahụ, ka anyị banye n'ime ọrụ abụọ kachasị mma nke Nchọpụta Nchọpụta Mmasị:
SEO mpaghara bụ ebe dị mkpa maka gị ma ọ bụrụ na azụmahịa gị na-ere na mpaghara ederede na itinye uche ka a na-emeri akara na ntinye aka na Google Maps, dịka ọmụmaatụ. Dika iwu nke SEO kachasị mma na njikarịcha ebe obibi, ana m akwado ịga maka:
. Nyochaa ego abụọ iji nwee ihe ọmụma zuru oke gbasara azụmahịa gị gụnyere ọtụtụ ederede a ma ama na Intanet dị ka o kwere mee. Naanị ịmalite na nchịkọta Google onwe ya. Isi ihe dị ebe a bụ nhazi gị, M na-egosipụta ndepụta ọ bụla nke gị kwesịrị ịdị n'otu, e. g. , ma ọ bụrụ na ị kpebiri iji ihe dịka "Str. "Maka nkọwa dị mkpirikpi nke" Street "na ibe gị nke Google Places, na-elekọta ndepụta ndị ọzọ iji gosipụta otu aka ahụ.
Ebe Google. Ịnọgide na-enwe SEO maka ebe nrụọrụ weebụ gị, ịnwere ike ime otu ihe ahụ maka ebe ị na-edebe Google Places. Debe ya nke ọma site na ịnye kpọmkwem otu edemede. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọ dị, jide n'aka na ị ga-enwe njikọ dị mma n'etiti ibe gị na ebe ibe weebụ ị ga-ebute.
Nnọkọ ntanetị siri ike. Ọtụtụ mgbe, e nwere naanị nyochaa Google gosipụtara na listi ya nke SERPs. Ya mere, ị nwere ike iwuli elu ọnụnọ n'ịntanetị maka azụmahịa gị site n'inwekwu nyocha site na isi ndị ọzọ dị ka Superpages, Trip Advisor, Yelp, na na.
Ihe na-esote bụ iji kwekọọ n'ụkpụrụ SEO n'oge a na-arụ ọrụ na ngalaba nke Social Media.Ka anyị chee ya ihu - oge ndị ahụ mgbe ọchụchọ ya na ụzọ mgbasa ozi na-abịa iche iche agafewo ogologo oge gara aga. Taa, ntanetị weebụ ọ bụla na-adabere n'ụdị dị iche iche nke mmekọrịta mmadụ na ibe, dịka mmasị na Facebook, òkè na Twitter, wdg. Ọzọkwa, ugbu a, nsonaazụ nsonaazụ aghọwo ọbụna onye ọzọ maka onye ọrụ ọ bụla. Ọ bụ ya mere na-arụ ọrụ na Social Media Marketing bụ MUST.
A sị ka e kwuwe, ịme njikarịcha maka isiokwu gị na ahịrịokwu ndị dị na ya, gbalịa ịtụgharị uche karịa ndị dị ndụ, kama ịchọta crawlers.Cheta na ihe ntinye okwu ntinye ziri ezi abughi ihe nkwado nke usoro iwu SEO. Otú ọ dị, banyere eziokwu nke oge a, ọdịnaya weebụ na isiokwu gị ga-abụdị ndị na-anabata ndị ọrụ dị adị karịa mgbe ọ bụla ọzọ. Ọ bụ ya mere na ị ghaghị ịkwụsị iche echiche nke isiokwu ndị ahụ dịka data data. Na-eme nchọpụta siri ike, buru n'uche ihe ndị mmadụ na-ebi ndụ bụ ndị ga-eji isiokwu gị dị mkpa maka ihe nyocha ha na-emekarị Source .